Qarax lagu soo xiray gaari oo galabta ka dhacay magaalda Muqdisho – Radio Muqdisho
Qarax lagu soo xiray gaari oo galabta ka dhacay magaalda Muqdisho
Sida ay gooob joogayaal Warbaahinta Qaranka u xaqiijiyeen Qarax lagu xiray gaari ayaa ka dhacay Waddada Maka Al-mukarama meel ku dhaw Hotel Wehliye ee Magaalada Muqdisho.
Goobta uu Qaraxa ka dhacay oo aheyd meel ay dad badan ku shaahayeen, waxaa uu qaraxaasi sababay dhaawac fudud oo gaaray sadex qofood oo ka mid ah dadkii goobtaasi ku sugnaa ,sida ay ku soo waramayso Wakaalada Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee SONNA.
Ciidanka Amaanka ayaa goobta Gaaray iyaga oo Xaqiijinaya ammaanka goobtaasi islamarkaana wada baaritaanno la xiriira qaraxaasi iyo ciddii ka dambeeysay.
Maleeshiyaadka Shabaab ayaa looga bartay qaraxyada noocan ah ee lala beegsado meelaha ay dadka rayidka ah ku badanyihiin.
Waxii dhaaf faahin dheerada ah kala soco wararkeena danbe
Daawo Sawirrada: Guddoomiyaha Degmada Gaalkacyo ee Puntland iyo Ku xigeenkiisa oo la doortay